फिचर राेजगार समाचार
होटल मजदुरका दु:ख
तलब कहिले आउँछ दाइ ? श्रमिक काेषमा ८० करोड तर २ महिनादेखि भाेकै
केशवराज जोशी कठमाडौं, ६ जेठ
कोरोनाको सन्त्रासका कारण अफिस बन्द छ । लकडाउनका कारण कृष्ण पुलामी घरमै बसेका छन् तर घरमै रहँदा पनि उनले परिवारलाई भने पर्याप्त समय दिन सकेका छैनन् । त्यसको एउटै कारण हो- फोनमा व्यस्त रहनु ।
उनी अन्नपूर्ण होटलका मजदुर युनियनका नेता हुन् । नेताहरूलाई यसै पनि केही कामका त केही बेकामका फोन आइरहन्छन् । तर, अहिले विशेष कारणले फोनको घण्टी बजाउँछन्, उनका साथीहरू ।
'तलब कहिले आउँछ दाइ ?', प्राय: फोन गर्नेहरूको पहिलो प्रश्न यही हुन्छ । यसको स्पष्ट उत्तर उनीसित पनि छैन । तर, साथीहरूको मन राख्नकै लागि भए पनि 'एक-दुई दिनमा हाल्लान् नि' भनिदिन्छन् । यस्तो भन्न थालेको पनि डेढ महिना हुन थालिसक्यो । अब त फोन गर्नेहरूलाई पनि उनको विश्वास लाग्न छाडिसक्यो भन्ने लाग्छ उनलाई ।
हीरा गुरुङ पनि डेला अन्नपूर्णकै युनियन नेता हुन् । उनलाई पनि निरन्तर उही प्रश्नले सताउने गर्छ । उनी पनि साथीहरूलाई 'व्यवस्थापनसित कुरा हुँदै छ । कुरा मिल्नेवित्तिकै तलब आइहाल्छ, धेरै तनाव नलिनू, काम गरेको पैसा कहीँ जाँदैन' भनेर सम्झाउँछन् ।
अहिले त गुरुङको ५ वर्षको छोरोले समेत बुबाको फोनको घण्टी बज्नेवित्तिकै 'दाइ, तलब कहिले आउँछ ?' भनेर जिस्क्याउन थालेको छ रे ! घरमा हुँदा प्राय: लाउड स्पिकरमा कुरा गर्ने गरेका गुरुङ भन्छन्, 'अब त छोरालाई पनि यो प्रश्न कण्ठ भइसक्यो ।'
डेला अन्नपूर्णमा मात्र होइन, प्राय: सबैजसो पाँचतारे होटलहरूमा यही अवस्था छ । तुलनात्मक रूपले अन्य क्षेत्रभन्दा आकर्षक जागिर मानिने होटल मजदुरहरू यतिखेर भने विगत २ महिनादेखि तलब नपाएर समस्यामा परेका छन् । होटल मालिकहरूले १२.५ प्रतिशत तलब मात्र दिन खोज्ने तर मजदुरहरूले पूरै तलब माग्ने गरेकाले होटल क्षेत्रमा ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, उपदान कोषलगायतका विभिन्न मुद्दाहरूमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको होटल अन्नपूर्णका मजदुर नेताहरू कुनै हालतमा झुक्ने पक्षमा छैनन् । अहिले झुकेमा भविष्यमा मजदुर आन्दोलनमा यसको ठूलो असर पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।
‘साथीहरू पैसा छैन, खानेकुरा सकियो, के गर्ने होला ? भन्दैै फोनमा दुखेसो पोखिरहेका छन्', पुलामी भन्छन्, 'आफ्नो पनि खानेकुरा सकिँदै गएको छ तर २ महिनादेखि तलब नपाएर हामी हैरान छौँ ।’
व्यवसायीहरूले श्रमिकहरूकै श्रमको बलमा विगतमा राम्रो आम्दानी गरेका तर कोरोना महामारीको समयमा व्यापार नभएको वहानामा तलबसमेत नदिएको मजदुर नेताहरूको गुनासो छ ।
होटल मालिकहरू अहिले वास्तवमै समस्यामा छन् भने पनि मजदुरहरूको नाममा विभिन्न कोषहरूमा सञ्चित करोडौँ रुपैयाँको रकमबाटै अहिले काम चलाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूका अनुसार विभिन्न शीर्षकमा मजदुरको नाममा त्यस्ता कोषहरूमा प्रत्येक होटलमा करिव ४० देखि ८० करोड रुपैयाँसम्म त्यस्तो रकम सञ्चित छ । अरू तरिकाले तलब दिन सकिँदैन भने पनि तिनै कोषहरूको उपयोग गरेर भए पनि आफ्ना कामदारहरूलाई तलब खुवाउनुपर्ने मजदुरहरूको माग छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ६, २०७७, ११:०५:००